भालुको पथ - अस्टुरियसमा ईतिहासको पूर्ण अद्वितीय वातावरण Absolut यात्रा
हामी प्राकृतिक स्थानहरू मन पराउछौं, ती सबै जसले पछाडि धेरै रहस्यहरू लुकाउँछ। त्यसकारण, आज हामी यसमा बाँकी छौं भालु मार्ग। एक अद्वितीय स्थान, धेरै खण्डहरू मिलेर बनेको छ जुन हामीलाई अस्टुरियसको सौन्दर्यमा लिन्छ। यदि तपाईं थोरै शान्ति चाहनुहुन्छ भने, प्रकृति पत्ता लगाउन र विच्छेद गर्न, यो तपाईंको ठाउँ हो।
यो मनपर्नेहरु मध्ये एक बन्छ जब तपाइँ यसलाई अलि बढी जान्नु हुन्छ। किनकि यसले इतिहासको आफ्नो अंश बोक्छ र हामी भन्छौ कि यसले हामीलाई केहि देखाउँदछ जसले हामीलाई अझ इच्छुक बनाउँदछ। यो नबिर्सनुहोस् पैदल यात्री-प्रकार पथ, एक साधारण सरल मार्गको साथ र प्रकृतिले घेरिएका आराम क्षेत्रहरूसँग।
1 सेंडा डेल ओसोमा कसरी पुग्ने
1.1 Oviedo बाट
1.2 Gijón बाट
2 अस्टुरियसमा भालु मार्ग के हो
3 पथका खण्डहरू
3.1 पहिलो तान
3.2 दोस्रो खण्ड
3.3 तेस्रो खण्ड
4 भालुको माग, कति किलोमिटर छ?
5 बाइक बाट बाटो भालु
6 दिमागमा राख्न सिफारिसहरू
सेंडा डेल ओसोमा कसरी पुग्ने
हामीलाई थाहा भइसकेको छ कि यो ठाउँ अस्टुरियसमा अवस्थित छ, तर यसबाट सुरू गर्दै हामी यो ठाउँ कहाँ थियौं भन्ने बारे थोरै मात्र जान्ने छौं र यदि हामी सब भन्दा साधारण शहरहरूबाट सुरु गर्छौं भने हामी कसरी त्यहाँ पुग्न सक्दछौं।
यदि तपाईंको प्रस्थान Oviedo बाट हो, त्यसो भए तपाई A-63 Grado तिर लिनु पर्छ। त्यसो भए, N-9 Trubia तर्फ 634 बाट बाहिर निस्कनुहोस्। अब हामीले सान्टो एड्रियानो - प्रोजा तिर नयाँ इग्जिट लिनु पर्छ। जब हामी कारागा डेबाजो पुग्छौं, हामी सान मार्टिन डे टेभर्गा तिर जान्छौं। जब हामी शहर एन्ट्रागो देख्छौं हामी दायाँ तिर जान्छौं जबसम्म हामीले पार्कि lot देख्दैनौं जुन पथको सुरूवात आदेश गर्दछ।
यो हुन सक्छ कि तपाइँको सुरूवात बिन्दु गिजान हो, त्यसपछि तपाइँ ओ -इडो तिर A-66 लिनुहुनेछ। त्यसपछि A-63 Grado तिर। निकास नम्बर ले तपाईंलाई N-9 634 ट्रुबियामा लैजान्छ। यहाँ एकपटक, हामीले अघिल्लो चीज भन्दा फेरि उल्लेख गर्यौं जुन सान्तो एड्रियानो - प्रोजा तिर हो।
पहिले तपाईंले Oviedo A8 तिर राजमार्ग लिनु पर्छ। बरु A-63 तिर तर्फ लिनुहोस् भागीदार, हामीले अघिल्ला सेक्सनहरूमा टिप्पणी गरेका छौं।
अस्टुरियसमा भालु मार्ग के हो
यो एक पथ वा पैदल यात्री मार्ग हो। यस अवस्थामा यसले वन र पहाड दुबै पार गर्ने खण्ड प्रशस्त गरीएको छ। यो पुरानो रेलवे लाइनमा बनेको छ जहाँ धेरै वर्ष अघि खानी रेलले पार गरेको थियो Trubia नदी उपत्यका को यात्रा। यो हामी के गर्छौं, तर ट्रेन बिना। किनकि यो -० को दशकको मध्यसम्म प्रयोग गरीएको थियो र दुवै फलाम र कोइला ढुवानी गर्ने जिम्मामा थियो। तर खानहरू थकित थिए र बेकारका कारण उनीहरू बन्द गर्नुपर्‍यो। त्यस पछि, तिनीहरूले यो मार्ग गरेर घाटीको सौन्दर्य कायम गर्ने निर्णय गरे। थप रूपमा, यससँग सुरुnelहरू, जलाशयहरू र बिस हाउस अफ बियर वा एथ्नोग्राफिक संग्रहालय क्विरस छन्।
यो सत्य हो कि यस ठाउँमा भ्रमण गर्न कुनै भीड छैन, त्यसैले यसलाई दुई वा तीन भागमा विभाजन गर्नु सामान्य छ। यदि उत्तरार्द्ध तपाईंको छनौट हो भने, तपाईं पहिलो खण्ड गर्न सक्नुहुनेछ जुन करीव kilometers किलोमिटरको हुन्छ, जसमध्ये दोस्रो, १.6..18,5 र तेस्रो र अन्तिम साढे चार किलोमिटर। यो अन्तिम भाग जसले कारaran्गा र भल्डेम्युरियो बीचको क्षेत्र समेट्ने अन्तिम उद्घाटन गरिने थियो।
हामी भन्छौ, तपाईं बनाउन वा तिनीहरूलाई विभिन्न तरिकाले विभाजित गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईं Tuñón मनोरन्जन क्षेत्र बाट जानु पर्छ। यो पहिलो खण्ड उद्घाटन गरिने पहिलो थियो। यस निकास पछाडि, हामी ला एस्गरडा पुल र त्यसपछि एल सान्तोको अर्को पुलबाट जान्छौं जुन हामीलाई Villanueva लग्छन्। त्यहाँ हामी देख्न सक्छौं Xanas को घाँटी। तपाईंले रोमन पुलको आनन्द लिनुहुनेछ र तपाईंले मनोरन्जन क्षेत्र देख्नुहुनेछ। मोन्टे डेल ओसो हराए बिना, भनिन्छ किनभने त्यहाँ भालू र भालुका विभिन्न प्रजातिहरू छन्।
हामी पहिले नै प्रोजामा पुगेका छौं, हामी यहाँबाट सुरु गरेर हिमालहरूको क्षेत्रमा जान्छौं। Caranga देखि Peñas जुन्टास घाटीमा, Sillón Del Rey र Peña Armada हुँदै।
अघिल्लो भन्दा धेरै छोटो र यो पनि सुरू हुन्छ कारंगा वाल्डेम्युरियो जलाशयतिर प्रजामा। पेनस जुन्टास पार गरिसकेपछि, हामी बाँया पक्ष लिन्छौं र कारaran्गा डेबाजो पछाडि, तपाईं सडकको समानांतर तपाईंको मार्ग जारी राख्नुहुनेछ। अर्को क्षेत्र जहाँ ठाउँको सुन्दरता पछाडि छैन।
भालुको माग, कति किलोमिटर छ?
यो भन्न सकिन्छ कि सब भन्दा आधारभूत वा साझा मार्ग, हामी त्यस बारे कुरा गरिरहेका हुनेछौं भालुको मार्ग करिब १ 18 किलोमिटर हो। तर हामीले सुरुमा सुरुमा भनेझैं, यो सत्य हो कि तपाईं यसलाई सँधै आफ्नो आवश्यकतामा अनुकूल बनाउन सक्नुहुन्छ। यसैले तपाईं जहिले पनि अधिक सेक्सनहरू थप्न सक्नुहुनेछ र Villamurio जलाशय वा Quirós तिर पुग्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि पनि बुयेरा। त्यहाँ तपाईंले सबै क्षेत्रहरू राम्ररी वर्णन गरिएको पाउनुहुनेछ, ताकि तपाईंलाई कुनै प्रकारको समस्या नपरोस् र तपाईं आफ्नो छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
बाइक बाट बाटो भालु
तपाईं यसलाई अधिक रमाईलो बनाउन सक्नुहुन्छ र साइकल भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ। तिनीहरूसँग यो सेवा पनि छ, त्यसैले तिनीहरूसँग घर वा टान्डममा सानाका लागि विशेष बास्केट पनि छ। उस्तै भाडामा पनि एक समावेश गर्दछ कि यदि तिनीहरूले तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्छन वा यदि कुनै बिन्दुमा यो लिनुहोस्। कुन सान्त्वनाको अर्थ धेरै परिवारहरूले साइकलमा यात्रा गर्न रोजे र यसको लागि डिजाइन गरिएको मनोरन्जन क्षेत्रमा आराम गर्न हरेक पटक रोक्दछन्।
दिमागमा राख्न सिफारिसहरू
बाँकी क्षेत्रहरूको साथसाथै, तपाईं केहि चीजमा स्नैक्स गर्न विभिन्न स्थानहरू पनि फेला पार्नुहुनेछ। अझै, तपाईंसँग विभिन्न शहरहरू नजिक छन्, जहाँ तपाईं खान रोक्न सक्नुहुन्छ। यो यस क्षेत्र पनि हो जुन तपाईंसँग धेरै छ होस्टल देश घर को रूप मा। तर हो, उच्च मौसममा तिनीहरू पूर्ण भरि हुन्छन्, त्यसैले पहिले नै अग्रिम बुकिंग गर्नु राम्रो हुन्छ।
यो भन्नु पर्छ कि तपाई घरपालुवा जनावरहरु संग पनि जान सक्नुहुन्छ र यो गर्न को लागी एकदम साधारण क्षेत्र हो। के यो उपयुक्त छ को लागी सबै उमेर को लागीकिनभने धेरै जसो केसहरूमा हामी आफैंलाई सरल तर तलतिर मार्गका साथ भेट्छौं। तपाईं आफ्नो हिंड्न बिहान १० बजे सुरु गर्न सक्नुहुन्छ जुन दिनको लाभ लिनको लागि एक उत्तम समय हो। याद गर्नुहोस् आरामदायक कपडा र एक ब्याकप्याक पानी र केहि नास्ताको लागि।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » भालु मार्ग